Dhaqaale intee la eg ayay FIFA kasoo xareyneysaa Koobka Adduunka ee 2022? – Gool FM
Ka hor kulanka caawa ee Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ka bogo xiddigaha goolasha ugu badan ka dhaliyey El Clasico Taariikhda
Dhaqaale intee la eg ayay FIFA kasoo xareyneysaa Koobka Adduunka ee 2022?
Haaruun March 25, 2021
(Zurich) 25 Maarso 2021. Koobka Adduunka ee 2022 ayaa laga baasan doonaa dalka Qatar marka la gaaro 21-ka November ee sanadka dambe, waxaana soo if baxaya sheekooyin la xiriira dhacdadaas.
Xeeldheerayaal dhaqaale ayaa ogaaday miisaaniyadda ay FIFA ugu talo gashay Koobka Adduunka ee 2022 iyo dhaqaalaha kaga soo xaroon doona dhacdada lagu qabanao dalka Qatar.
Hay’adda maamusha kubadda cagta dunida ayaa 1.1 bilyan oo gini ku qarash gareyn doonta tartanka Koobka Adduunka oo afartii sano mar la qabto, hase ahaatee, sida lagu soo saaray warbixinta sanadlaha ah ee FIFA ayaa lagu sheegay inay lacag intaas ka badan ka heli doonaan dalka dhaca Bariga Dhexe.
Marka laga soo tago miisaaniyadda ay ku dhaqaaqi doonto FIFA sanadkan dambe, waxaa la ogaaday lacagta soo geli doonta oo ah 3.4 bilyan oo gini taasoo inta ugu badan kasoo xarooneysa Koobka Adduunka sida ay qabaan dhaqaalyahannada.
Xuquuqda warbaahinta, suuq geynta iyo ilo kale ayaa xiriir la leh Koobka Adduunka dhaqaalaha kasoo xaroonaya kaasoo lagu qiyaasay 3 bilyan oo gini, tii oo ay xusid mudan tahay inay isla sanadka dambe qabsoomi doonaan tartanka Koobka Adduunka ee hablaha da’doodu ka hooseyso 17-jirrada iyo Koobka Adduunka ee hablaha ka yar 20-ka sano, si la mid ah Koobka Adduunka ee ciyaar gacmeedka FIFA oo loo yaqaano FIFA eWorld Cup.
Dhaqaalaha FIFA kaga soo xaroonaya xuquuqda warbaahinta inta sanadka 2022 ayaa lagu qiyaasay in ka badan 1.9 bilyan oo gini, halka xuquuqda suuq geynta lacagaha ka imaanaya lagu qiyaasay ku dhowaad Hal bilyan oo gini.
Dhanka kale, marka laga soo tago dhaqaalaha xoogga leh ee uu xiriirka FIFA ka helayo Koobka Adduunka, hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa mar kale ugu baaqday xiriirka kubadda cagta dunida inay ka taxaddarto shaqaalaha biilka qoysaskooda kasoo doonay dhismaha garoommada lagu qaban doono Koobka Adduunka.
Sida lagu sheegay warar horraan soo baxay, shaqaale gaaraya 37 shaqaale oo ka howl galayay dhismaha garoomadda kubadda cagta ee lagu qaban doono Koobka Adduunka ayaa ku geeriyooday dalka Qatar.
Juventus oo suuqa soo dhigtay mid ka mid ah xiddigaheeda ugu sarreeya... (Ma ahan Ronaldo)
Kaddib markii ay ka hartay tartanka FA Cup-ka, rajadooda horyaalkana ay noqotay mid adag, muxuu yahay qorshaha Manchester United ay ka leedahay macallinkeeda Ole Gunnar Solskjaer?